Home Wararka Waa maxay sababaha uu Farmaajo uga horyimid ceyrinta Jan. Xajaar?
Waa maxay sababaha uu Farmaajo uga horyimid ceyrinta Jan. Xajaar?
Qaraxii bishii hore dabayaaqadeedii ka dhacay Ex-Control Afgooye kaas oo ay dad dabani ku dhinteen ka dib ayaa waxa Madaxweyne Farmaajo lagula taliyay in uu si deg deg ah u casislo Taliyaha ciidanka Booliska Janaraal Cabdi Xasan Maxamed Xajaaar.
Farmaajo ayaa waxa uu culays ka soo fuulay beesha caalamka iyo shacabka reer Muqadishu oo aad uga xumaaday hadalkii uu Janaraal Xajaar ka sheegay goobtii uu qaraxa ka dhacay, isaga oo u diiday duqa magalaada Muqadishu, CUamr Filish in uu baahiyo tirada dadka masaakiinta ah ee ku dhibtay qaraxaas.
Farmaajo ayaa ku dhaartay in aan marnaba la ceyrin doonin Janaraal Xajaar. Waxa uu sheegay in ceyrinta Janaraalka ay keenayso in shacabka reer Muqadishu ay ku dhiiradaan in ay dowlada ka horyimaadaan.
“… kuwii lahaa Muqdisho amaankeeda ma qaban karaan dad aan ahayn ka soo jeedin beesha Hawiye, marnaba uma ogolaan doono in aan siino fursad ay uga dhabeeyaan hadalkaas dhalanteedka ahaa ee aan qabriga ku duugnay… Soomaaliya horay ayaa ay u soconaysaa, Janaraal Xajaarna, aniga ayaa go’aan ka gaarayo marka aan ceyrin doono…” ayuu Farmaajo oo ka jawaabayay taladii uu u soo jeediyay Xasan Kheyre.
Janaraal Xajaar ayaa si kalsooni ah hada dib ugu dar-dar galiyay shaqadiisa isaga oo aan marnaba wal-wal ka qabin in shaqada la ceyriyo. Shacabka reer Muqadishu ayaa waxaa isugu darsan tahay mucaarad aan lahayn awood siyaasadeed, mid ciidan iyo Farmaajo oo ay ka go’an tahay in uu shacabka reer Muqadishu cashar uu u dhigo.
Farmaajo ayaa ehel la ah Janaraal Xajaar dhanka hooyadii. Janaraal Xajaar ayaa horay loogu eedeeyay in uu qayb ka ahaa xasuuqii ka dhacay magalaada Hargeysa markii uu ka tirsnaa ciidanka Hangashka ee uu adeegsan jiray Siyaad Barre.